Faallo: Haraadigu yuusan kala harin
Bartamihii bishii afraad ee sannadkan ayaan qoray qorma cinwaankeedu ahaa: “Foolal cusub iyo Faro Caddaana!” oo aan ku qoray dhawr qodob oo muhim u ah maamul walba oo ka dhismaya Soomaaliya, Gobol, Degmo iyo Tuulaba. Qormadaa waxaa wehlisay heesta: “Waa inaan dib loo arag” ee ay ku xareediyaan Kooxda Qaylodhaan erayadii Bashir M. Hersi. Maanta oo wajigii hore ee qodabbadii qormadaa iyo heestuba hirgaleen, ayaan doonayaa in aan mar kale ku soo laabto isla mawduucii, si aan u sii xoojiyo qodobbadaas, loona dhammaystiro hannaanka geeddi socodka billowday, ilaa laga guranayo mirihii oo dhan, maadaama aan is leeyahay in maanta ay tahay maalintii la hirgalin lahaa qodob iyo qoraal, hawraar iyo hadal midkood ku jira, ee aan hoosaasin iyo haasawe midna loo hamuun qabin. Haddii madaxda dawladda u sarraysaa aysan ku sheegganayn:
Inay qabyaaladiistayaal yihiin. Inay yihiin qabqablayaal.
Aqriste, xasuuso qodobbadan horaan u qoraye, waxaanna ku sii dari lahaa qodobbadan: in haraadigu uusan kala harin, waxaan uga jeedaa, maadaama madaxdii hore uusan qofna dib uga soo laaban, waa inaan xil loo magacaabin masuul walba oo xil hore uga soo qabtay dawladihii burburka, gaar ahaan Golaha Wasiirrada inaan lagu soo darin Wasiirradii dawladihii hore dalka u soo maray, marka laga reebo dawladdii Maxamed Siyaad Barre, isna waa inuusan ku eedaysnayn xasuuq, barakicin iyo muqus. In mudanihii Wasiir noqda uusan Baarlamaanka xubin ka sii ahaan, oo mid ku ekaado Xildibaannimo ama Wasiirnimo, sidaa waxaan u leeyahay inaysan dhicin inuu laba Mushaar qaato [Laba canlayn] illeen beesaba looma hayee. Taa sokow, inuusan laba awood oo is dhexgalaysa isla hayn, dabcan, dunida waa ka jirtaa, oo wax diidaya ma lahan, balse, dani anaga nooguma jirto, illeen mudane isagu isu codaynayaa, is dacweyn maayee!
Qodobkan bal aan daliil u doonee, Allaha u naxariistee, Abwaan C/qaadir Xersi “Yamyam” baa shirkii Addis Ababa ka dhacay sanaddii 1993-dii ku maansooday sidan: Waagii mudnaantiyo Wasiir magac ku faanaa Baabuur madaw iyo Muraayadaha xiran jiray Meelaha nacfiganale
Loo kala hor mari jiray Maareeyana la noqon jiray Gudbe maalmahoodii! Waxa timid marxalad adag Oo maamul sare iyo Ninka madax u ciilqaba Masuuliyadu qaadiyo Kow dhaar la mariyaa Tahay miiskii soo gado
Maqrib iyo ilaa subax Ilaa qaranka maydkaa
In la baddalo Maareeyaha Dekadda Muqdisho iyo Maraayaha Garoonka Aadan Cadde, maxaa yeelay xilalkan marka laga soo tago inay xasaasi yihiin, waa ilaha ugu muhimsan ee dawladda dhaqaale ka soo galo, sidaa awgeed, waa in loo xulaa rag hufan oo aan ka soo qaybqaadan maamulladii hore ee musuqu daashaday. In xilalka laga qaado dhammaad saraakiisha ugu sarraysa ee ciidaanka iyo nabad sugidda, marka laga reeno Gen. Dhaga badan, Abbaaduuliyaha Ciidan Qaabka Qaranka, oo aan la’aantiis guushaan la gaareen.
In la baddalo Guddoomiyaha Maxkamadda sare, dabcan ma sharcibaa mise ma ma ahan? Waa arrin kale, ujeedku waa inaysan kala harin hoggaankii hore, ee nala haray halkanna na soo gaarsiiyey. Ugu dambayn, isu gaynta qodobbadab yaa isugu soo aruuraya cinwaanka qormada, ee ah: “Haraadigu yuusan kala harin” maadaama ay sii xaqiijinayso in aan la kala reebin kuwii musuqa iyo murrugmaarugta ku mashaqeeyey dalkan iyo dadkan.
Dulligana nasoo baday Waa inaan dib loo arag
Ina dagay markii hore Waa inaan dib loo arag
Dan yarta iyo Agoonta Ku dibbiray xaqoodii
Ganacsiga danleeyda Waa inaan dib loo arag
Dadweynoow inaga jira. Doorkii horreetiyo
Ee dumiyey daaraha Waa inaan dib loo arag
Dadweynoow inaga jira. Xil ninkii u duubane Dibitaatinimo raba